नारायणकाजीमाथि प्रश्न गर्दै बाबुरामले भने – वैद्यानिक तलबभत्ता नलिने तर, ऐय्यासी जीवन शैली जिउने ? « Sansar News
नारायणकाजीमाथि प्रश्न गर्दै बाबुरामले भने – वैद्यानिक तलबभत्ता नलिने तर, ऐय्यासी जीवन शैली जिउने ?
२९ मंसिर २०७७, सोमबार ११:५१
काठमाडौं । जनता समाजवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको जीवन शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । भट्टराईले वैद्यानिक आम्दानी नलिएर आदर्शवादी बन्ने श्रेष्ठको ऐय्यासी जीवन कसरी चलिरहेको छ भनि प्रश्न गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत भट्टराईले भनेका छन्, ‘आफ्नो नाममा कुनै देखल सम्पत्ति नराख्ने ! वैधानिक तलवभत्ता नलिएर वाहवाही कमाउने ! आसेपासेहरूका नाममा रातारात करोडौं/अरबौं सम्पत्ति जम्मा हुने ! उनीहरूका विवादमा मध्यस्थता गर्ने ! ऐय्यासी जीवन बिताउने !’
भट्टराईका अनुसार क्रोनी क्यापिटालिज्म भनेकै हालको नेपाली राजनीतिको शैली हो । जहाँ एक अर्काका गलत प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गरिने पनि उनले बताए ।
आफ्नो नाममा कुनै देखल सम्पत्ति नराख्ने! वैधानिक तलवभत्ता नलिएर वाहवाही कमाउने!आसेपासेहरूका नाममा रातारात करोडौं/अरबौं सम्पत्ति जम्मा हुने! उनीहरूका विवादमा मध्यस्थता गर्ने!ऐय्यासी जीवन बिताउने!यही त हो क्रोनी क्यापिटालिज्म कणहरू! एक अर्कालाई ढाकछोप गरौं! नेपाली विशेषताको समाजवाद?
भट्टराईले नेपाली विशेषताको समाजवाद यहि हो भनि प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘यही त हो क्रोनी क्यापिटालिज्म कणहरू ! एक अर्कालाई ढाकछोप गरौं ! नेपाली विशेषताको समाजवादरु’, भट्टराईले भनेका छन् ।
नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नेता श्रेष्ठ पछिल्लो समय विवादमा तानिएका छन् । स्वर्गीय कमानसिंह लामा र श्रेष्ठबीचको आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित भिडियो बाहिरिएसँगै उनी विवादमा तानिएका हुन् ।
जहाँ साढे दुई करोडको हिसाब मिलाईदिन कमानसिंहले श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए ।